Knowledge – Page4– Shwe Sar
၁၈ ရက်နေ့ တစ်ရက် ပဲ လုပ် လို့ ရ တဲ့ ၉ရက် အတွင်း ငွေသိသိ သာသာ ဝင်လာစေတဲ့ ယတြာ……
၉ရက်အတွင်း အရောင်းအဝယ်တွေကောင်းစေပြီး ငွေသိသိသာသာဝင်လာစေတဲ့ ယတြာ ၁၈ရက်နေ့ မနက် ၆:၀၀ ကနေ ၉:၀၀ အတွင်း မြတ်စွာဘုရားကို အမွှေးတိုင်၅တိုင်ကပ်လှုပေးပါ အမွှေးတိုင်မထွန်းခင်မှာ အမွှေးတိုင်ကိုလက်နဲ့ကိုင်ပြီး သမ္ဗုဒ္ဓေဂါတာ(၇)ခေါက် ၂၄ပစ္စည်းအကျဉ်း(၄)ခေါက်ရွတ်ပါ ရွတ်ပြီးမှ အမွှေးတိုင်ကို မြတ်စွာဘုရားကိုပူဇော်ပါ ဆွမ်းနဲ့ကြက်ဥမွှေကြော်၁လုံးပါကပ်လှုပေးပါ […]
သောင်းကျန်းနေ တဲ့ ကြွက် ကို အသိုက်ပြောင်းပြေးစေမယ့် နည်းလမ်းကောင်းလေး
ကြွက် ပြေးသော နည်းလေးကြွက်တွေက ပေါလိုက်တာ့ ပေါတာမှ စာအုပ်တွေကိုက် အဝတ်တွေကိုက်ညကျတော့ တစ်ဝုန်းဝုန်းနှင့် လိုက်တမ်းပြေးတမ်းကစားကြ ၊ကျိန်းမရအောင်ဖြစ့် တစ်ကောင်နှင့်တစ်ကောင်လှမ်းအော်ကြတစ်ခါ တလေများဆို ပြေးရင်းလွှားရင်းခြင်ထောင်အမိုးပေါ်ဒိုင်ဘင်ထိုးချ လွန်တာမှအတော်လွန့်အဲ့ဒါနှင့်ကလေးတွေက ထောင်ချောက်ထောင်မယ် လျှောက်တယ့်မလုပ်နှင့် ဆေးကျွေးမယ်ဆိုတယ့်လုံးဝမလုပ်နှင့်ပေါ့….အဲ့ဒါနှင့်တစ်နေ့ကျတော လက်မောင်းအောင့်လို့လင်ဇီးဒါဏ်ကြေဆေးလိမ်းတယ့် ပူလိုက်တာ့..အခိုးကလည်း မွှန်ပြီးမျက်ရည်ကျတယ့် […]
သွားပိုး စားခြင်း အတွက် သဘာဝဆေး ကုထုံး (၃) မျိုး
သွားပိုးစားတဲ့ဒဏ်ခံ ဖူးတဲ့သူတွေတော့ သိကြမှာပါ။ ဘာစားစားတဆစ်ဆစ်ကိုက်နေပြီး သက်တောင့်သက်သာတောင်မရှိတော့ပါဘူး။ သွားထဲမှာအစာတွေကျန်ခြင်း၊ အချိုရည်တွေနင်းကန်သောက်ခြင်း၊ ခံတွင်းသန့်ရှင်းမှုမရှိခြင်း စတာတွေက သွားပိုးစားခြင်းရဲ့အဓိကအကြောင်းအရင်းတွေပါ။ သွားပိုးစားတာကို သတိထားမိတာနဲ့ ကုသသင့်ပါတယ်။ ပေတေပြီးထားလေလော သွားအမြစ်ကြောတွေအထိပါထိသွားနိုင်တာမို့ဝေဒနာမပျင်းခင် ကုသလိုက်ပါ။ ကုသပါဆိုတာနဲ့ ဆရာဝန်ဆီပြေးမှမဟုတ်ပါဘူးနော်။ သွားပိုးစားတာကို အခ […]
ပံ့သကူပစ် ပါ (အားလုံး ကြပ်တည်းနေ တဲ့ခေတ်ကြီး မှာ ကုသိုလ်တွေ အများကြီး ရပါ လိမ့်မယ်)
တန်ဆောင်မုန်း လပြည့်ည ၁၂ နာရီမှာ ပံ့သကူပစ်ပါ။ ကိုယ်ပြန်ရမယ့် စီးပွား လာဘ်လာဘ ကိုမမျှော်ကိုးပဲ စိတ်စေတနာ သန့်ရှင်းစွာ ပံ့သကူပစ်ပါ။အစစအရာရာ ကြပ်တည်းလာတဲ့ ခေတ် မှာ ပံ့သကူပစ်ပါ ရတဲ့ သူ ပျော်ရွှင်ပါစေ။ ငွေပမာဏ […]
တစ်ချို့တွေ သရက်ရွက် အနုေ တွကို ငပိရည် တို့စရာအဖြစ် စားသုံးကြတာကိုလည်း တွေ့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျနော်တို့ မထင်မှတ်ထားတဲ့ အတိုင်း တစ်ခုဖြစ်လို့လာခဲ့ပါပြီး။ ဒါကတော့ သ ရ က်ရွက် ပြုတ်ရည်ဖြစ်ပါတယ် သရက်ရွက်က အာဟာရဓာတ် […]
ပန်းရံဆရာ တွေ အကြိမ်ကြိမ်ပြုပြင်သော်လည်း ရီနေတဲ့ပုံ သာဖြစ်နေတဲ့ မကွေးမြသလွန်ဘုရားမှ ဘီလူး၏ သမိုင်းကြောင်း
မကွေးမြသလွန် ဘီလူး ရီနေတဲ့ပုံရဲ့ သမိုင်းကြောင်း ကတော့ ဒီလိုတော့သိတယ် ဘီလူး က ၆ကောင်ပါ ဘီလူးမနှစ်ကောင် ကိုချန်လှပ်ထားတယ် သမိုင်း မှာ ဘောသော ဘောကျော် ဘော သူ ရာ ဘောရသ ဘီးလူး […]
ဆေးဖက်ဝင်ပုံ တမူထူးတဲ့ လောက်သေပင်.
မြန်မာ့ဆေးဖက်ဝင် လောက်သေပင် Item Name —— Desmodium triquetrum DC(လောက်သေပင်) Category ——— Raw Material Botany Term —– Desmodium triquetrum DC Species Family […]
အရမ်းတန်ဖိုးရှိပါတယ် မိမိဖုန်း ထဲ မယ်သိမ်း ထား ပါ
စာဖတ်သူ ဓမ္မမိတ်ဆွေများ အတွက်ရည်ရွယ်ပြီး ဆရာတော်ဘုရားများဟောပြလမ်းညွှန်ထားသောတရား တော်များမှအသိဉာဏ် ဗဟုသုတနှင့်ကုသိုလ် တရားများ စဉ်ဆ က် မပြတ်တိုး ပွားေ စ ရန်ေ န့စဉ် ဓမ္မအကြောင်းရာလေးတွေ မျှဝေ တင်ပြအပ်ပါတယ် ဓမ္မမိတ်ဆွေများ အားလုံး ကျန်းမာ […]
ကလေးအတက်ရောဂါပျောက်စေ သည့် မြန်မာ့ဆေးမြီးတို တစ်ခု ရှဥ့်မတက်ဥ (ကညွတ်ဥ).
မြန်မာဆေး ကျမ်းများ အလိုအရ။ ရှဥ့်မတက်သည်ချိုဆိမ့်၏၊ခါး ၏၊ ခွန်အားကိုဖြစ်စေ၏။ ဝမ်းမီးကို တောက်စေကာ ၀ ဖြိုးစေ၏။ သုက်၊နို့ရည်ကိုပွားများစေ၏။ နှလုံး ရောဂါ၊သွေးအန်၊ သွေး ကျ၊ အဆုတ်နာတို့ကို ပျောက်စေ၏ သလိပ်သည်းခြေကိုနိုင်၏။ သွေးလုံးလေလုံး ရောဂါ၊ဖေါရောင်ခြင်း၊မျက်စိရောဂါ၊ […]
ခါးနဲ့ကျောကုန်း ကိုက်တာတွေ ကို တစ်ခဏတွင်း ပျောက် ကင်းသက်သာ သွားစေ မယ့် နည်းလမ်းများ
ကျောကုန်း ၊ ခါးတွေကိုက်ခဲနာကျင်တတ်တဲ့သူဆိုရင်တော့ ဒီဆောင်းပါးလေးက သင့်အတွက်ပါ။ အထိုင်များလို့ပဲဖြစ်ဖြစ် ၊ လှုပ်ရှားဟန်မမှန်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ် ခါးတွေ ၊ ကျောတွေ ကိုက်ခဲေ ညာ င်း ညာေ နတတ်ပါတယ်။ကျောကုန်း နဲ့ ခါးကိုက်တာတွေကို တစ်ခဏချင်းမှာပဲ ပျောက်ကင်းသက်သာသွားစေမယ့် […]